Soomaali Ku Biiri Lahaa Kooxda Daacish Oo Laga Sii Daayey Maraykanka – Hornafrik Media Network
Soomaali Ku Biiri Lahaa Kooxda Daacish Oo Laga Sii Daayey Maraykanka
By HornAfrik	 On Nov 14, 2017
Nin Dhallinyaro Somali-Maraykan ah, kuna eedeysanaa inuu sannadkii 2015-kii ku biiri lahaa Kooxda Daacish ayaa laga sii daayey Xarun Dhaqan-celin oo ku taalla dalkaasi.
C/llaahi Yuusuf oo ka mid ahaa 9 nin oo Somali ah ku biiri lahaa Kooxda Daacish oo ay Hay’adda FBI-da Maraykanka xireen ayaa noqday qofkii ugu horreeyey ee Mraaykan ah oo loo oggolaaday inuu dib ugu laabto Bulshada, kadib, isku-daygiisa inuu ku biiwo Maleeshiyadda Kooxda Daacish-ta ka dagaalanta dalalka Iraq iyo Syria.
Garsoore Federal oo ka hawlgala Maxkamad ku taalla magaalladda Minneapolis ayaa amray in C/llaahi Yuusuf oo 21-jir ah la sii daayo, iyadoo lagu xirayo Qalabka Ilaaladda oo muddo 20-sanno lagula socon doono Dhaqdhaqaaqiisa.
C/llaahi Yuusuf ayaa la hayey tan iyo markii Xukunka lagu riday bishii November ee sannadkii hore.
Sii dayntiisa ayaa timid, kadib, markii Garsoore Sare Misheel Dafis uu muddo 45-daqiiqo ah su’aalo weydiiyey C/llaahi Yuusuf iyo Saraakiil ka socotay Xafiiska Adeegga Dacwadaha iyo Dhegeysiga ee Gobalka Minnesota.
Si kastaba ha ahaatee, C/llaahi Yuusuf ayaa la sheegay intii uu ku jiray Xarunta Dhaqan-celinta inuu helay Shahaahada Dugsiga Sare, wuxuuna bartay Hawlaha La-talinta iyo ka mid ahaanshaha Adeega Bulshadda.
Sanbaloolshe oo Bilaabay inuu Faafiyo Muuqaalada Qarixii Soobe ee Baaritaanadda loo isticmaalayay.
Sawirro:-Gudoomiyaha G/Banaadir Oo Shir Caalami Ah Uga Qeyb Galaya Talyaaniga